Cali khaliiF VS Cabdiweli Gaas | allsanaag
Cali khaliiF VS Cabdiweli Gaas
Labada Macalin ee Maraykanka ka yimid waa kala siyaasad fiican yihiin.
Macalinka jaamacadeed ee markii danbe noqday madaxweynaha Khaatumo Cali Khaliif , ayaa maamulkiisii Khaatumo waxa si cad diiday inay ictiraafaan ama taageero siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayey Xasan Culusoow. Culusoow ayaa markii danbe si qabyaaladaysan u dhisay maamulada Galmudug iyo Hir Shabeele oo labaduba ka danbeeyey maamulka Khaatumo. Xildhibaanadii maamuladaasi waxay ka mid yihiin kuwa soo dooranaya madaxweynaha Soomaaliya
Madaxweyne Cali Khaliif maanta waxay ahayd isaga oo siyaasad ahaan ka aargoosanaya Xasan Culusoow inuu Muqdisho tago oo halkaa ka bilaabo olole ka dhan ah doorashada Xasan Culusoow , Sababtoo ah qabyaalad ayuu Culusoow ku diiday in maamulkii Khaatumo hirgalo, isaga oo la saftay maamulkii dalka Sioomaaliya kala go’ynayey ee SNM . Xasan Culusoow hal maalin ma canbaarayn weeraradii joogtada ahaa ee SNM ku hayeen maamulka Khaatumo. Degaanada Khaatumo waxa ka jira abaar iyo biyo la’aan hal shilin ilaa maanata kama ayna helin dawladda federaalka Soomaaliya . Xildhibaanadii Khaatumo ee federaalka iygana duhur cad ayaa la bililiqayystay, waxaana fududeeyey Xasan Culusoow .
Cali Khaliif oo la sugayey in arimaha maamulkiisa iyo beeshiisa lagu sameeyey uu wax ka qabto, oo ay ahayd meesha uga haboonayd uu arintan u tegi lahaa magaalada Muqdisho wuxuu ka doortay inuu Hargaysa aado maalimihii ay bilaabmeen doorashada madaxweynaha Soomaliya.
Macalinka kale ee jaamacadeed ee isaguna markii danbe noqday madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas. ka dib markii uu hal cod kaga adkaaday madaxweynihii hore ee Puntlamd Cabdiraxmaan Faroole, ayaa isagu wuxuu maray jid ka duwan kii Cali Khaliif, wuxuuna u arkay siyaasigii uu halka cod kaga adkaaday oo maanta u sharaxan madaxweye Soomaaliyeed inay khatar ku tahay joogitaankiisa Garowe. Wuxuuna bilaabay olole ka dhan ah Faroole iyo kooxdiisa Muqdisho ay isku shukaansadeen , taasina waxay keentay in Duhur cad Sheekh Cabdiraxmaan Faroole uu gacmaha kor u taago oo ka tanaasulo Murashaxnimadiisii.
Ugu danbayntlii labadii Macalin ee kala hogaamniyey Khaatumo iyo Puntland, waxay kala doorteen in Macalin Gaas uu maanta Muqdisho joogo una ololeenayo ninkii uu dantiisa ka arkayey inuu madaxweyne Soomaaliya ka noqdo. Halka Macalin Cali Khaliif uu ku sugan yahay Gurigii Morgan ee Majeerteen ee Hargaysa ku yaalay oo ay ku sugan yihiin koox cuqdadaysan oo gurigaas Majeerteen hoosta ka soo xiratay 25 sano.
← MAXAY TAHAY SABABTA UU MUSHARAX FAROOLE U TANAASULAY? JAAMACADDA MAAKHIR →